Wokugaya - K-Tek Machining Co., Ltd.
Precision izahlulo ngomatshini processing
Ukwenziwa kweeNxalenye zoMatshini
CNC Ivula (2-12 Axis)
Ukwenziwa kweeCandelo eziPhezulu
Gqiba & unyango Ubushushu
Ukwenziwa kweeHadiwe zeKhompyutha
Izixhobo zokwenza izixhobo
I-K-Tek inezixhobo eziphambili zokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ze-CNC, kubandakanya ukugaya, ukujika, i-EDM, ukusika ucingo, ukugaya umphezulu nokunye. Sisebenzisa amazwe 3, 4 no-5-axis amaziko machining CNC ukukunika ngqo enkulu, bhetyebhetye emangalisayo, kunye nemveliso endilisekileyo phantse kuyo nayiphi na iprojekthi machining. Asinawo oomatshini abohlukeneyo, kodwa liqela leengcali, abazimiseleyo kukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu e-China. Oomatshini bethu abanezakhono banokusebenzisa iintlobo ngeentlobo zeplastiki kunye nezinto zentsimbi ukuvelisa izinto eziguqukayo kunye neendawo zokugaya.
Siyakuqinisekisa ukuba nokuba ungakanani na umsebenzi, iingcali zethu ziwuthatha ngokungathi ngowazo. Sinokubonelela ngomzekelo weenkonzo ze-CNC zokuchwetheza ezinokukunceda ekufumaneni umfanekiso ocacileyo wemveliso yokugqibela.
I-K-Tek ikhethekileyo kumatshini wokulungisa ngokuchanekileyo. Iinkonzo eziManyanisiweyo ezizodwa zibuqaqambile ubuchule bazo kunye neenkqubo. Iinjineli zethu ziya kusebenza kunye nawe ukuqinisekisa ubuninzi bemigangatho yoyilo lokuvelisa kunye nokudibana. Inkonzo yabathengi ebalaseleyo kunye nolwaneliseko ziimpawu zenkampani yethu kunye nesiseko kwimpumelelo yeshishini lethu.
Ngexesha elifanelekileyo -Siyaqonda ukuba ezinye iinxalenye zomsebenzi wethu zinomhla osikiweyo ongxamisekileyo, kwaye sinazo izakhono neendlela zokuqinisekisa ukuba senza umsebenzi kwangexesha ngaphandle kokuphazamisa umgangatho womsebenzi esiwenzayo.
Onamava -Sibonelele ngeenkonzo zokugaya ze-CNC ngaphezulu kweminyaka eyi-10. Siqokelele uluhlu olubanzi loomatshini bokugaya abaphambili kuluhlu olubanzi lweenkqubo kwaye baneqela elinamava leenjineli nabaqhubi ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubo bonke abathengi bethu.
Amandla - Ngokwahluka koomatshini bethu, siyakwazi ukuqinisekisa ukuchaneka kwazo zonke izinto kuzo zonke ubukhulu.
Imveliso yeVolumu esezantsi - Ukuveliswa kwemithamo ephantsi sisisombululo esifanelekileyo sokulawula uluhlu lwakho kunye nokuvavanya imarike ngaphambi kokuvelisa izixa ezikhulu. Ukukhetha ukuThengiswa kweVolumu esezantsi lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Precision Milling Kwaye Systems CNC eyiyo
Ngonikezelo lwesipholisi sokuphotha lwethu, sinako ukusika izinto ngokukhawuleza kuneenkqubo zokutshiza ezipholileyo eziqhelekileyo, kunye ne-CAD / CAM, UG kunye nePro / e yethu, i-3D Max. Unokunxibelelana ngokufanelekileyo ngakumbi nabathengi ngezobuchwephesha kwaye ukukhawulezisa kakhulu inkqubo yonke kunye nokubonelela ngeemveliso ngokusebenza okuphezulu. Amaziko ethu amabini okusila e-CNC afaka ii-knuckles ezizenzekelayo ezivumela ukuba sikwazi ukuqhuba kuyo nayiphi na i-engile. Kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezingqukuva, oku kusenza sikwazi ukufikelela kwijometri efanayo entsonkothileyo njengawo nawuphi na umatshini we-axis ezintlanu.
Iimpawu CNC yethu Ivula
Uyilo lathe 1.CNC lathe, ulwakhiwo modularization
2. Isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu
3. Umtya ngamnye kunye nobukhulu bunokufuna "ikliphu" ethile (uhlobo olungaphantsi lwekhollet-ukwenza ikhola ejikeleze into).
4. Ubude bebar bunokwahluka ngokuxhomekeke kwisondli se bar.
5. Izixhobo ze-CNC lathes okanye amaziko ajikayo afakwe kwi-turret elawulwa yikhompyuter.
6. Kulumkele ukumila okunzima njengezakhiwo ezinde ezibhityileyo
Izinto Esisebenza Nazo
Izinto ezahlukeneyo esisebenza nazo zibandakanya, kodwa azikhawulelwanga:
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Titanium UDelrin Khuphela
Ubhedu Inconel Polypropylene ILexan
IAluminiyam IHastelloy UHMW Acrylic
Ubhedu Super engayi PVC Phenolics
Ingqele eqengqelekileyo intsimbi Ubhedu Unyango ITeflon
Umxube weNickel Iimonels PVC PTFE
ICarbon Fibre Zonke iiAlloy zeAlloy Nylon IPOM
Unyango loMgangatho Ukuqhumisa isanti, ukudubula imbabala, Ukugaya, ukuziqengqa, ipolishi, Ukuxubha, ukutshiza, ukupeyinta, ukupeyinta ioyile njl.
Unyango oluphezulu lweKhemikhali Bluing and Blackening, Phosphating, Pickling, Electroless Plating of Metals ezahlukeneyo neAlloys njl
Unyango lwe-Electrochemical Surface I-Anodic Oxidation, i-Electrochemical Polishing, i-Electroplating njl.
Unyango lwale mihla I-CVD, i-PVD, ukumiliselwa kwe-Ion, i-Ion Plating, i-Laser Surface yoNyango ect.
Ukuqhushumba kwesanti Ukuqwayita kwentlabathi eyomileyo, ukuqhumisa isanti emanzi, ukuqhumisa isanti
Ukutshiza Ukutshiza Electrostatic, Udumo Ukutshiza, Powder Ukutshiza, Plastic Ukutshiza, Plasma Ukutshiza
Ukuchonga umbane Isingxobo seCopper, iChromium Plating, iZinc Plating, iNickel Plating
Ngokukodwa kumatshini wokulungisa ngokuchanekileyo kunye nokupasa i-ISO9001: isiqinisekiso se-2015.
Ummandla we-Xinhe wezoShishino, iSithili saseWanjiang, isiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong, eChina